⭐️၂၉လမ်း အောက်ဘလောက်က "မြင့်" ချစ်တီးထမင်း⭐️
⭐️၂၉လမ်း အောက်ဘလောက်က “မြင့်” ချစ်တီးထမင်း⭐️
20 Aug 2017 . 11:39 AM
ဆူးလေတဝိုက် ချစ်တီးထမင်း စားချင် ဒီဆိုင်လေးကို အားကိုးကြတယ်။ ဒုတိယထပ်ဆိုတာလေးတော့ တက်ရမှာပေါ့နော်။ ဆိုင်ဖွင့်တာ ကြာခဲ့ပြီ။ ဂျာနယ်တွေ မီဒီယာတွေ တော်တော်များများကလည်း သူ့အကြောင်း ရေးသားထားကြတယ်။ အခုဆို Facebook မှာ ကိုယ်ပိုင်စာမျက်နှာအနေနဲ့ Myint Family Indian Restaurant ဆိုပြီး Social media ပေါ်မှာ ဆက်သွယ်နိုင်နေပါပြီ။
ဒီဆိုင်မှာ အမြဲစားနေကြက ဆိတ် ဦးနှောက်။ အနှစ်များများလေးကို ဆီကာလာ အနီလွှမ်းပြီး ချက်ထားတယ်။ ဆိတ်သားလည်း ချက်တာ နူးအိလို့နေတယ်။
အများကြီး ညွှန်းစရာ မလိုပါဘူး။ ပါပလာကြော် စားကောင်းတယ်။ ပဲဟင်းက မွှေးတယ်။ ဒိန်ချဉ်နဲ့ လုပ်တဲ့ ကြက်သွန်ချဉ် နံမည်ကြီးတယ်။ ဒိန်ချဉ်ရနေပြီပြောတယ်။ ရောက်ရင် သောက်ကြည့်ကြဖို့ မမေ့တဲ့နော်။
ဒုတိယထပ်မှာမို့ တက်ရတာ အသက်ကြီးတဲ့သူတွေအတွက် အဆင်မပြေမှုရှိမယ်။ နေရာက ကျဉ်းတယ်ဗျ။ နေ့လည် လူကျချိန်ဆို စားရတာ အဆင်မပြေဘူး။ နောက်ပြီး ဖက်ရွက်နဲ့ စားလို့ရသလို ပန်းကန်နဲ့လည်း စားလို့ရပါတယ်ဗျ။ ဒီထပ်အဆင်မပြေတာက ဘုရားစင်ရှေ့မှာ ဖိနပ်စီးပြီး ထိုင်စားရတာ အဆင်မပြေဘူး။ ဝင်ဝင်ချင်းဘုရားစင်ရှိမယ်။ ဆိုင်ရဲ့ အနေအထားအရဆို အမြဲဆူညံနေတယ်။ ဆိုင်ထဲက လူတွေနဲ့တင်။
ဆိုင်တည်နေရာက ၂၉ လမ်းဆိုတော့ ကိုယ်ပိုင်ကားနဲ့ လာရင် ကားရပ်ရ အဆင်မပြေဘူးနော်။
သူ့ဆိုင်က ဘာတွေရသလဲ ဆိုတာ ကူးလာခဲ့တယ်။
ဆိုင်မှာ ရရှိနိူင်သော Menu
ကြက်သားဟင်း/ကြော် ….. ၂၅၀၀
ကြက်အသဲမြစ် ….. ၂၅၀၀
ကြက်ဥငါးခြောက် ….. ၂၅၀၀
ဆိတ်သားဟင်း/ကြော် …… ၂၅၀၀
ဆိတ်ခေါင်းဟင်း …… ၂၅၀၀
ဆိတ်ကလီဇာ. …… ၂၅၀၀
ဆိတ်ဦးနှောက် …… ၃၀၀၀
ဆိတ်ဖိုက်တင်း …… ၃၀၀၀
ငါးဟင်း/ကြော် …… ၂၅၀၀
ငါးကြော်ချက် …… ၂၅၀၀
ငါးရံ့အူ …… ၄၀၀၀
ပုဇွန်ဟင်း …… ၄၀၀၀
သတ်သတ်လွတ်. …… ၂၀၀၀
(ဂဏန်းတွေ ပုဇွန်တွေ စားချင် ကြိုမှာလို့ရပါတယ်တဲ့)
လိပ်စာက အမှတ် ၈၁,ဒုတိယထပ်,၂၉လမ်း အောက်ဘလောက်, ပန်းပဲတန်း
ဖုန်းက ၀၉ ၇၃၀၀၅၄၆၄,၀၉ ၇၉၅၃၆၁၀၃၀, ၀၉၅၀၉၄၃၄၇
Food –3Out of 5
Service –4Out of 5
Hygiene –2Out of 5
Location –3Out of 5
Price –3Out of 5
(ဒီဆိုင်ကိုကြိုက်တဲ့သူများသလို မကြိုက်တဲ့သူလည်းများတယ်နော်။ မသွားခင် သူ့Page က review ပဲ ဖြစ်ဖြစ် အခြားသူတွေ မေးကြည့်တာပဲ ဖြစ်ဖြစ် လေ့လာပြီးမှ သွားပါလို့)
ရကောက် – Akhayar
ဆူးလတေဝိုကျ ခဈြတီးထမငျး စားခငျြ ဒီဆိုငျလေးကို အားကိုးကွတယျ။ ဒုတိယထပျဆိုတာလေးတော့ တကျရမှာပေါ့နျော။ ဆိုငျဖှငျ့တာ ကွာခဲ့ပွီ။ ဂြာနယျတှေ မီဒီယာတှေ တျောတျောမြားမြားကလညျး သူ့အကွောငျး ရေးသားထားကွတယျ။ အခုဆို Facebook မှာ ကိုယျပိုငျစာမကျြနှာအနနေဲ့ Myint Family Indian Restaurant ဆိုပွီး Social media ပျေါမှာ ဆကျသှယျနိုငျနပေါပွီ။
ဒီဆိုငျမှာ အမွဲစားနကွေက ဆိတျ ဦးနှောကျ။ အနှဈမြားမြားလေးကို ဆီကာလာ အနီလှမျးပွီး ခကျြထားတယျ။ ဆိတျသားလညျး ခကျြတာ နူးအိလို့နတေယျ။
အမြားကွီး ညှနျးစရာ မလိုပါဘူး။ ပါပလာကွျော စားကောငျးတယျ။ ပဲဟငျးက မှေးတယျ။ ဒိနျခဉျြနဲ့ လုပျတဲ့ ကွကျသှနျခဉျြ နံမညျကွီးတယျ။ ဒိနျခဉျြရနပွေီပွောတယျ။ ရောကျရငျ သောကျကွညျ့ကွဖို့ မမတေဲ့နျော။
ဒုတိယထပျမှာမို့ တကျရတာ အသကျကွီးတဲ့သူတှအေတှကျ အဆငျမပွမှေုရှိမယျ။ နရောက ကဉျြးတယျဗြ။ နလေ့ညျ လူကခြိနျဆို စားရတာ အဆငျမပွဘေူး။ နောကျပွီး ဖကျရှကျနဲ့ စားလို့ရသလို ပနျးကနျနဲ့လညျး စားလို့ရပါတယျဗြ။ ဒီထပျအဆငျမပွတောက ဘုရားစငျရှမှေ့ာ ဖိနပျစီးပွီး ထိုငျစားရတာ အဆငျမပွဘေူး။ ဝငျဝငျခငျြးဘုရားစငျရှိမယျ။ ဆိုငျရဲ့ အနအေထားအရဆို အမွဲဆူညံနတေယျ။ ဆိုငျထဲက လူတှနေဲ့တငျ။
ဆိုငျတညျနရောက ၂၉ လမျးဆိုတော့ ကိုယျပိုငျကားနဲ့ လာရငျ ကားရပျရ အဆငျမပွဘေူးနျော။
သူ့ဆိုငျက ဘာတှရေသလဲ ဆိုတာ ကူးလာခဲ့တယျ။
ဆိုငျမှာ ရရှိနိူငျသော Menu
ကွကျသားဟငျး/ကွျော ….. ၂၅၀၀
ကွကျအသဲမွဈ ….. ၂၅၀၀
ကွကျဥငါးခွောကျ ….. ၂၅၀၀
ဆိတျသားဟငျး/ကွျော …… ၂၅၀၀
ဆိတျခေါငျးဟငျး …… ၂၅၀၀
ဆိတျကလီဇာ. …… ၂၅၀၀
ဆိတျဦးနှောကျ …… ၃၀၀၀
ဆိတျဖိုကျတငျး …… ၃၀၀၀
ငါးဟငျး/ကွျော …… ၂၅၀၀
ငါးကွျောခကျြ …… ၂၅၀၀
ငါးရံ့အူ …… ၄၀၀၀
ပုဇှနျဟငျး …… ၄၀၀၀
သတျသတျလှတျ. …… ၂၀၀၀
(ဂဏနျးတှေ ပုဇှနျတှေ စားခငျြ ကွိုမှာလို့ရပါတယျတဲ့)
လိပျစာက အမှတျ ၈၁,ဒုတိယထပျ,၂၉လမျး အောကျဘလောကျ, ပနျးပဲတနျး
ဖုနျးက ၀၉ ၇၃၀၀၅၄၆၄,၀၉ ၇၉၅၃၆၁၀၃၀, ၀၉၅၀၉၄၃၄၇
(ဒီဆိုငျကိုကွိုကျတဲ့သူမြားသလို မကွိုကျတဲ့သူလညျးမြားတယျနျော။ မသှားခငျ သူ့Page က review ပဲ ဖွဈဖွဈ အခွားသူတှေ မေးကွညျ့တာပဲ ဖွဈဖွဈ လလေ့ာပွီးမှ သှားပါလို့)
ရကောကျ – Akhayar